Hordhaca Fikirka iyo Diidmada - Word Foundation
Hordhaca fikirka iyo Dareenka
Cutubka 1aad ISTICMAASHADA IYO DESTINY
Cutubkan koowaad ee Fikirka iyo Dareenka waxaa loogu tala galay in aan kuusoo bandhigo kaliya dhowr maado oo buuggu kahadlayo. Maadooyinka badankood waxay u muuqan doonaan wax lala yaabo. Qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa inay naxdin leeyihiin. Waxaad ogaan kartaa in dhammaantood ay dhiirrigelinayaan tixgelinta fekerka leh. Markaad barato fikirka, oo aad ka fikirto habka aad u marayso buugga, waxaad ogaan doontaa inay si isa sii taraysa u caddaanayso, iyo inaad ku jirto geeddi-socodka horumarinta fahamka xaqiiqooyinka aasaasiga ah ee aasaasiga ah laakiin hore ee qarsoodiga nolosha - iyo gaar ahaan naftaada .
Buuggu wuxuu sharraxayaa ujeeddada nolosha. Ujeeddadaasi maahan oo keliya in la helo farxad, halkan ama aakhiraba. Midkoodna maahan in "naftiisa" la badbaadiyo. Ujeedada dhabta ah ee nolosha, ujeedada qancin doonta caqliga iyo caqliga labadaba, waa tan: in qofkasta oo inaga mid ah uu si tartiib tartiib ah miyir ugu jiri doono darajooyin sare oo waligiis ah isagoo miyir qaba; taasi waa, miyir-qabka dabeecadda, iyo gudaha iyo iyada oo loo marayo iyo wixii ka dambeeya dabeecadda. Dabeecad ahaan waxaa loola jeedaa wax kasta oo qofku ku kasban karo dareen ahaan.
Buuggu sidoo kale wuxuu kugu barayaa naftaada. Waxay kuu keeneysaa farriinta naftaada ku saabsan: naftaada qarsoodiga ah ee ku dhex nool jirkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad waligaa isku aqoonsan jirtay iyo inaad tahay jirkaaga; oo markii aad isku daydo inaad ka fikirto naftaada markaa waxaad ka fikirtaa habka jirkaaga. Adoo caadeysanaya waxaad uga hadashay jirkaaga sida "Aniga", "Aniga". Waxaad caadeysatay inaad adeegsato ereyo sida "markaan dhashay," iyo "markaan dhinto"; iyo "Waxaan isku arkay muraayadda," iyo "Waan is nastay," "Waan is-gooyay," iyo wixii la mid ah, markay runti tahay jirkaaga oo aad ka hadlayso. Si aad u fahanto waxa aad tahay waa inaad marka hore si cad u aragtaa kala duwanaanta udhaxeysa naftaada iyo jirka aad ku nooshahay. Xaqiiqda ah inaad ereyga "jirkeyga" u isticmaasho sida ugu fudud ee aad u isticmaasho mid ka mid ah kuwa aan soo sheegnay oo keliya ayaa soo jeedinaysa inaadan gebi ahaanba diyaar u ahayn si loo sameeyo kala soociddan muhiimka ah.
Waa inaad ogaataa in aadan jirkaaga ahayn; waa inaad ogaataa in jidhkaaga uusan ahayn adiga. Waa inaad tan ogaatid maxaa yeelay, markaad ka fekereyso, waxaad ogtahay in jirkaaga aad uga duwan tahay waxa ka ahaa markii, markii caruurnimadu, markii ugu horreysey aad ka warqabtay. Inta lagu jiro sanadaha aad ku nooshahay jidhkaaga waxaad ogeyd in ay isbeddelayso: marka uu sii marayo ilmanimadeeda iyo dhalinyaradeeda iyo dhalinyaradeeda, iyo xaaladdeeda hadda, way isbedeshay. Oo waxaad garowsaneysaa in jirkaaga aad u bislaaday waxaa jiray isbeddel tartiib ah oo ku saabsan aragtidaada aduunka iyo aragtidaada nolosha. Laakiin isbeddeladaas oo dhan waxaad ku sugnayd: taas oo ah, waxaad isku moodaysay inaad isku kalsoon tahay, isku mid ah, aniga oo dhan. Fikraddaada ku saabsan xaqiiqadan sahlan waxay ku qasban tahay in aad ogaato inaadan hubaal ahayn oo aanad noqon karin jirkaaga; halkii, in jidhkaagaagu yahay mid jidheed oo aad ku nooshahay; hab-dhaqan dabiici ah oo aad ku shaqaynayso; xayawaan aad isku dayeyso in aad fahamto, tababbar iyo xirfadle.
Waad ogtahay sida jidhkaagu ugu yimid dunidan; laakiin sidaad ku soo gashay jidhkaaga ma ogid. Ma aadan soo galin ilaa xoogaa markii ay dhalatay ka dib; sanad, laga yaabee, ama dhowr sano; laakiin xaqiiqadan waad ogtahay wax yar ama waxba, maxaa yeelay xusuusta jirkaaga waxay bilaabatay kaliya markaad jirkaaga soo gasho kadib. Waxaad wax ka ogtahay waxyaabaha ku saabsan jirka uu weligiis isbeddelayo uu ka kooban yahay; laakiin waxa aad tahay garan maysid; weli maadan miyir qabin sida aad tahay jirkaaga. Waad ogtahay magaca jirkaaga looga sooco kuwa kale; tanna waxaad ku baratay inaad ka fikirto magacaaga. Waxa muhiimka ah ayaa ah, inaad ogaato, maahan qofka aad tahay shakhsiyan, laakiin waxaad tahay shaqsi ahaan - naftaada u miyir qabo, laakiin aanad wali u miyir qabin naftaada, aqoonsi aan kala go 'lahayn. Waad ogtahay in jirkaagu nool yahay, waxaadna si macquul ah u rajeyneysaa inuu dhiman doono; waayo waxaa xaqiiqo ah in jir kasta oo bina aadam ah waqtiga ku dhinto. Jirkaagu wuxuu lahaa bilow, isna wuu leeyahay dhammaad; bilaw ilaa dhamaadna waxay ku xiran tahay sharciyada aduunka ee ifafaalaha, isbedelka, waqtiga. Adigu, si kastaba ha noqotee, si isku mid ah uma tihid sharciyada saameeya jirkaaga. In kasta oo jirkaagu beddelo maaddada ay ka kooban tahay inta badan marka loo eego inta aad ka beddelayso dharka aad ku labbisato, haddana aqoonsigaagu isma beddelo. Weligaa isku mid baad tahay
Sida aad u fekereyso runtaas waxaad ku ogaaneysaa, si kastaba ha ahaatee waxaad isku dayi kartaa, ma malayn kartid inaad adigu waligaa ku dhammaato, wax ka badan waxaad u maleyneysaa inaad adigu waligaa bilowday. Tani waa sababta oo ah aqoonsigaagu waa bilowga iyo aan dhammaad lahayn; xaqiiqda ah, nafsaddaada oo aad dareemeyso, waa mid aan la noolaan karin oo aan wax-qabad lahayn, weligiiba ka sii fogaanaya gaadiidka isbeddelka, waqtiga, dhimashada. Laakiin waa maxay tani waa aqoonsigaaga qarsoodi ah, ma garanaysid.
Markaad isweydiiso, "maxaan ku ogahay inaan ahay?" Jiritaanka aqoonsigaagu wuxuu aakhirka kugu sababi doonaa inaad uga jawaabto qaab sidan ah: "Wax kastoo ay tahay waxaan ahay, waan ogahay ugu yaraan inaan miyir qabo; Waan ku baraarugsanahay ugu yaraan inaan miyir qabo." Markaad ka sii socoto xaqiiqadan waxaad odhan kartaa: "Sidaa darteed waan ku baraarugsanahay inaan ahay. Waan garanayaa, weliba, inaan anigu ahay iyo inaan kale ahayn. Waxaan ka warqabaa in aqoonsigaygan aan ku baraarugsanahay- Caqli-galnimada iyo is-aammusnaanta aan si cad u dareemayo - noloshayda oo dhan isma beddelayso, in kasta oo wax kasta oo kale oo aan ku baraarugsanahay ay umuuqdaan xaalad isbeddel joogto ah. " Adoo ka sii ambaqaadaya tan waxaad dhihi kartaa: "Weli ma aqaan waxa qarsoodiga ah ee aan isbedelayo ee aan ahay; laakiin waxaan ka warqabaa in jidhkan bani'aadamka ah, ee aan ka warqabo inta lagu jiro saacadaha aan soo jeedo, ay jiraan wax miyir qaba; iyo damacyada iyo fikirka, laakiin taasi isma beddelayso; wax miyir leh oo doonaya oo ku dhiirrigelinaya jirkan inuu dhaqmo, haddana sida muuqata jidhku ma aha.
Sidaa daraadeed, adiga oo fekeraya, waxaad u maleyneysaa inaad naftaada u tixgelinayso sida jirka oo magac leh iyo qaar kale oo kala duwan, laakiin sida miyir-qabka ah ee jirka ku jira. Miyir beelka jidhka waxaa loogu yeeraa, buuggan dhexdiisa, jimicsi-jirka-dhexdiisa. Jirka-ku-jir waa mawduuc uu buuggu si gaar ah uga walaacsan yahay. Sidaa darteed waxaad ka heli doontaa waxtar leh, markaad buuggan ka akhrido, inaad ka fikirto naftaada sida ujeeddo qaabaysan; si aad u eegto naftaada sida qof aan bini-aadan ahayn oo jirka ku jira. Markaad barato inaad nafsaddaada ka fikirto, sida jilicsanaanta jirkaaga, waxaad qaadan doontaa tallaabo muhiim ah oo aad ku fahmi karto qarsoodiga naftaada iyo kuwa kale.
Waxaad ka warqabtaa jirkaaga, iyo wax kasta oo ka mid ah dabeecadda, iyada oo la adeegsanayo dareenka. Waxay ku xirantahay kaliya jidhkaaga oo aad dareensan tahay inaad awood u leedahay inaad ka shaqeyso aduunka oo dhan. Waxaad shaqeyneysaa adoo fekeraya. Fekerkaaga waxaa kuugu imaanaya dareenkaaga iyo rabitaankaaga. Dareenkaaga iyo rabitaanka iyo fekerkaaga si cad u muuqata waxqabadka jidhka; Dhaqdhaqaaqa jirka ayaa ah kaliya xuruufta, bixinta, hawlahaaga gudaha. Jidhkaaga oo leh dareenkiisa waa qalab, farsamo, kaas oo lagu soo rogay dareenkaaga iyo rabitaankaaga; waa mashiinka dabeecadda shakhsi ahaaneed.
Dareenkaagu waa nooleyaal nool; unugyada aan la arki karin ee walxaha-dabiiciga ah; Kuwani waxay bilaabayaan xoogag ku faafaya dhismaha jirka oo dhan; waa hay'ado in kasta oo aan caqli lahayn, haddana u miyir qabaan shaqooyinkooda. Dareenkaagu wuxuu u adeegaa sida xarumaha, gudbiyaha dareenka ee u dhexeeya walxaha dabiiciga iyo mashiinka aadanaha ee aad ku shaqeyneyso. Dareemayaashu waa danjirayaasha dabeecadda ee maxkamaddaada. Jirkaaga iyo dareemayaashiisu ma laha awood ay ku shaqeeyaan tabaruce; aan ka badnayn galoofkaaga aad ku dareemi karto waxna ku qaban karto. Taabadalkeed, awoodaasi waa adiga, hawl wadeenka, naftaada miyir qabta, sameeyaha u muuqda.
Adiga la'aan, sameeyaha, mashiinku waxba ma qaban karo. Hawlaha aan qasabka ahayn ee jirkaaga - shaqada dhismaha, dayactirka, hagaajinta unugyada, iyo wixii la mid ah - waxaa si otomaatig ah u qaada mashiinka neefsashada shaqsiyeed maadaama ay u shaqeyneyso iyo iyadoo lala kaashanayo mashiinka dabeecadda weyn ee isbeddelka. Shaqadan caadiga ah ee dabeecadda ah ee jidhkaaga ayaa si joogto ah loogu farageliyaa, hase yeeshe, fikirkaaga aan dheellitirka lahayn iyo midka aan caadiga ahayn: shaqadu way murugsan tahay oo waa la baabi'inayaa illaa heerka aad u horseeddo xiisad jireed oo burbur iyo dheellitir la'aan ah adoo u oggolaanaya dareenkaaga iyo rabitaankaaga inay ku dhaqmaan adiga la'aan xakamaynta miyirka. Sidaa darteed, si dabeecadda loogu oggolaado inay dib ugu cusboonaysiiso mashiinkaaga faragelin la'aan fikirkaaga iyo shucuurtaada, waxaa laguu siinayaa inaad mar mar iska dhaafto; dabeecadda jidhkaagu waxay bixinaysaa in isku-xidhka adiga iyo dareenka isku haya uu mararka qaarkood dabacsan yahay, qayb ahaan ama gebi ahaanba. Nasashadaan ama iska bixida dareenka waa hurdo.
Inta jidhkaagu seexdo adiga ayaa lagaa maqanyahay; macno gaar ah waad ka fogtahay. Laakiin markasta oo aad jidhkaaga toosiso waxaad isla markiiba miyir qabtaa inaad tahay isla ‘aniga’ ee aad ahayd ka hor intaadan jidhkaaga kaga bixin hurdo. Jirkaaga, ha soo jeedo ama ha seexdo, waxba kama war qabo, weligiis. Waxa miyir qabo, waxa fekeraya, adigu naftaada ma tahay, sameeyaha ku dhex jira jirkaaga. Tani waxay soo muuqaneysaa markaad tixgeliso inaadan ka fikirin inta jirkaagu hurdo; ugu yaraan, haddii aad u malaynayso inta lagu jiro muddada hurdada ma garanaysid ama ma xasuusatid, markaad kiciyo dareenkaaga jirka, wixii aad ka fikiri jirtay.
Hurdadu waa mid qoto dheer ama riyo ah. Hurdada qotada dheer waa xaaladda aad naftaada uga baxdo, iyo inaad ka maqnaato dareenka; waa gobolka ay dareemayaashu joojiyeen inay shaqeeyaan maxaa yeelay waxaa laga jaray awooda ay ku shaqeynayaan, waa kuwee awoodaada, sameeyaha. Riyadu waa gobolka go'itaanka qayb ahaan; gobolka dareenkaagu ka soo jeesanayo walxaha bannaanka ka ah ee dabiiciga ah si uu ugu shaqeeyo gudaha dabeecadda, isagoo u dhaqmaya si la xidhiidha maadooyinka walxaha la arko inta lagu jiro soo jeedka. Marka, kadib muddo hurdo qoto dheer ah, aad dib u gasho jirkaaga, isla markiiba aad toosiso dareenka oo aad bilowdo inaad ku dhex shaqeysid mar kale howl wadeenka caqliga badan ee mashiinkaaga, adigoo waligiis u fakaraya, u hadlaya, una dhaqmaya sidii dareen-iyo- rabitaanka aad tahay. Caadada nolosha oo dhan waxaad isla markaaba isku garataa inaad tahay iyo jirkaaga: "Waan seexday," waxaad leedahay; "hadda waan soo jeeday."
Laakiin jidhkaaga iyo jidhkaaga ka dib, marba marka ka dambaysa soo jeed oo hurdo; nolosha iyo dhimashada, iyo waddamada dhimashada ka dib; iyo nolosha ilaa noloshaada oo dhan - aqoonsigaaga iyo dareenkaaga aqoonsiga ayaa jira. Aqoonsigaagu waa shay aad u dhab ah, markastana kula jooga; laakiin waa wax qarsoon oo caqliga qofka uusan fahmi karin. In kasta oo aan lagu qaban karin dareemayaasha haddana si kastaba ha noqotee waad ka warqabtaa joogitaankeeda. Waad ku baraarugsan tahay dareen ahaan; waxaad leedahay dareen aqoonsi; dareen ah I-ness, of selfness; waxaad dareemeysaa, iyada oo aan su'aal lagaa helin ama caqli gal ahayn, inaad tahay qof isku mid ah oo isku mid ah kaas oo nolosha ku sii jira.
Dareenkan joogitaanka aqoonsigaagu waa mid aad u qeexan oo aanad u malayn karin in jirkaaga jirkaaga waligiis uu noqon karo mid kale oo aan ahayn naftaada; waad ogtahay in aad had iyo jeer isku mid tahay adiga, si joogta ah isku mid ah, isla sameeye. Markaad jidhkaaga jiifto si aad u seexatid oo aad u seexatid uma maleyn kartid in aqoonsigaagu uu soo afjari doono ka dib markaad nasato haynta jirkaada oo aad tagto; waxaad si buuxda u filaneysaa in markaad miyir-beel ku noqoto jirkaaga oo aad bilowdo maalin cusub oo waxqabadyo ah, waxaad weli isku mid noqonaysaa adiga, isku mid ah, isla sameeyaha.
Sida hurdada, sida dhimashada. Dhimashadu waa hurdo dheer, oo ah hawlgab ku meelgaar ah oo ka timaadda dunidan aadanaha. Haddii wakhtiga dhimashada aad ka warqabto dareenkaaga, waxa aad isku dayi doontaa in hurdo dheer oo dhimasho uusan saameyn ku yeelan doonin sii wadista aqoonsigaada mid ka badan inta aad huruddo habeenkii . Waxaad dareemi doontaa in mustaqbalka aan la garaneynin aad sii socon doonto, xitaa sida aad maalin kale sii waday ilaa noloshii dhammaatay. Tani, adiga, taas oo aad miyir beeshay noloshaada oo dhan, waa isku mid isku mid ah, sidaad isku mid tahay, taas oo u egtahay mid miyir-beel ah oo sii socota maalin kasta maalin kasta noloshii hore.
Inkasta oo waayihii hore ee qarsoodiga ahaa ay hadda yihiin qarsoodi, hadda noloshaadii hore ee dhulka ma aha mid cajiib ah tan nolosha nolosheeda. Subax walba waxaa jira qarsoodi ah in aad dib ugu soo noqotid jirkaada hurdadaada-aan-ogayn- halkaa, adoo ku soo galaya hab-raac aadan-aqoon-sida, iyo mar kale noqotana inaad miyir-qab tahay adduunkan dhalashada iyo dhimasho iyo waqti. Laakiin tani waxay dhacdey marar badan, muddo dheer waxay ahayd mid dabiici ah, in aanay u muuqan in ay tahay qarsoodi; waa dhacdo caadi ah. Hase yeeshe, way ka duwan tahay habka aad mareyso marka, bilawga ilbiriqsiyo kasta, waxaad gashaa jimicsi cusub oo laguugu sameeyay dabeecadda, oo la tababaray oo diyaariyey waalidkaa ama masuulkaaga sida cusub degenaanshaha adduunka, maaskaro cusub sida shakhsi ahaaneed.
Shakhsi ahaan waa shakhsi, maaskaro, kaas oo jilbaha, dhaqdhaqaaqa, ku hadlaa. Sidaa darteed waa ka badan yahay jirka. Si shakhsi ahaan loo noqdo jidhka bini'aadamka waa in lagu toosiyaa joogitaanka joogista ee ku jira. Dhamaan riwaayadda nolosheeda oo isbedbedesha waxay qabanqaabisaa shakhsiyaadka, oo waxay ku dhaqmaysaa oo ay ku hadlaysaa maaddaama ay ka ciyaareyso qaybteeda. Sida shakhsi ahaaneed uu qofkaasi u maleynayo inuu naftiisa yahay shakhsi ahaan; taas oo ah, masquerader wuxuu naftiisa u arkaa inuu yahay qayb ka mid ah oo uu ciyaarayo, oo wuxuu iska illoobaa naftiisa sida miyir la'aanta maskaxda ee maaskarada.
Waa lagama maarmaan in laga fahmo dib-u-noolaanshaha iyo aayaha, haddii kale suurtagal maaha in lagu xisaabtamo kala duwanaanshaha dabeecadda iyo dabeecadda aadanaha. Si loo caddeeyo in sinnaan la'aanta dhalashada iyo saldhigga, ee hantida iyo saboolnimada, caafimaadka iyo jirrada, ay ka dhashaan shil ama fursad ay meel ka dhac ku tahay sharciga iyo caddaaladda. Intaa waxaa dheer, in loo nisbeeyo caqliga, caqliga, hal-abuurnimada, hadiyadaha, awoodaha, awoodaha, wanaagga; ama, jahliga, dulqaad la'aanta, daciifnimada, caajisnimada, xumaanta, iyo weynaanta ama yaraanta dabeecadda kuwan ku jirta, sida ka timaadda hiddo-wadaha jirka, ayaa ka soo horjeeda caqliga iyo garaadka. Dhaxalku wuxuu la xiriiraa jirka; laakiin dabeecada waxaa sameeya qofka fikirkiisa. Sharciga iyo caddaaladdu waxay xukumaan dunidan dhalashada iyo dhimashada, haddii kale kama ay sii socon karin koorsooyinkeeda; oo sharciga iyo cadaaladda ayaa ka xoog badan arrimaha aadanaha. Laakiin saameyntu had iyo jeer isla markiiba ma raacdo sababta. Beeridda isla markiiba lama raaco goosashada. Sidoo kale, natiijooyinka ficil ama fikir ayaa laga yaabaa inaanay muuqan illaa iyo muddo faragelin dheeri ah kadib. Ma arki karno waxa ka dhex dhaca fikirka iyo ficilka iyo natiijooyinkooda, wax ka badan inta aan arki karno waxa ka socda dhulka inta udhaxeysa abuurka iyo goosashada; laakiin qof kasta oo ka mid ah jidhka bini-aadamka wuxuu u sameeyaa sharcigiisa aakhiro sida uu u fikiro iyo waxa uu sameeyo, in kasta oo laga yaabo inuusan ka warqabin marka uu qorayo sharciga; mana garanayo kaliya goorta dawada la buuxin doono, sida qaddarka, waqtigan xaadirka ah ama nolosha mustaqbalka ee dhulka.
Maalin iyo nolol inta badan waa isku mid; waa xilliyo soo noqnoqday oo jiritaan joogto ah taas oo qofka wax qabanayaa uu ka shaqeynayo aayihiisa isla markaana uu isku dheelitirayo xisaabtiisa aadanaha iyo nolosha. Habeenkii iyo geeridii, sidoo kale, aad ayey isugu egyihiin: markaad u siibanto si aad jidhkaaga u oggolaato inuu u nasto oo u seexdo, waxaad ku dhex maray khibrad aad u la mid ah tii aad soo martay markii aad jidhka ka tagtay markii aad dhimatay. Riyadaada habeennimo, weliba, waa in lala barbardhigaa xaaladaha dhimashada ka dib ee aad sida joogtada ah uga soo gudubto: labaduba waa wejiyo waxqabad shaqsiyadeed oo sameeyaha ah; labadaba waxaad ku nooshahay fikirkaaga soo kacaya iyo ficiladaada, dareenkaaga wali wuxuu ku shaqeynayaa dabeecada, laakiin gudaha gudaha gudaha dabiiciga. Iyo xilliga habeennimo ee hurdada qoto dheer, marka dareenadu aysan sii shaqeynaynin - xaalada illowsiinta ee aysan jirin wax xusuus ah - waxay u dhigantaa muddada banaan ee aad ku sugeysid marinka adduunyada jireed illaa xilliga aad dib ugula xiriiraan dareenkaaga jidh jidh cusub: jidhka dhallaanka ama jidhka ilmaha ee adiga laguugu talogalay.
Markaad bilawdo nolol cusub, waxaad miyir-qabtaa, sida qatar. Waxaad dareemeysaa in aad tahay arrin go'an oo qeexan. Dareenka Tani ama kalsoonidu waxay tahay waxa kaliya ee dhabta ah ee aad u miiran tahay wakhti badan. Dhammaanba waa qarsoodi. Wakhti yar oo aad ku dhacdo, laga yaabo inaad xitaa dhibtooto, jidhkaaga cusub ee qariibka ah iyo agagaaraha aan aqoon. Laakiin sida aad u baraneyso sida aad u shaqeyneyso jirkaaga oo aad u isticmaasho dareenkeeda waxaad tartiib tartiib ah u gartaa inaad adigu iska dhigto. Intaa waxaa dheer, waxaa laguugu tababbaray dadka kale si ay u dareemaan in jidhkaagaagu yahay naftaada; waxaa laguu dhigay inaad dareento inaad tahay jirka.
Sidaa awgeed, marka aad ka badan tahay adigoo ka hooseysa xakameynta dareemaha jidhkaaga, waxaad noqotaa wax yar oo aanad miyir-qabin in aad tahay wax ka duwan jirka oo aad ka shaqeyso. Oo markaad korto caruurnimada waxaad lumin doontaa taabashada wax walba oo aan la dareensanayn dareenka, ama dareenka leh dareennada; waxaad maskaxda ku xirnaan doontaa aduunka ee jir ahaaneed, miyir-beelka kaliya ee dhacdooyinka, khaldan. Xaaladahaan waxaa lagaa rabaa inaad qarsoodi ku ahaato naftaada.
Qarsoodi weyn ayaa ah naftaada dhabta ah - naftaas weyn ee aan kujirin jirkaaga; kuma jiro adduunkan dhalashada iyo dhimashada; laakiin taas, iyada oo og, oo aan dhimanayn oo ka jirta Meesha Joogtada ah ee dhammaantiis, waa joogitaan kula jooga intaad nooshahay oo dhan, iyo dhammaan waxyaalaha aad ka seexato ee hurdada iyo dhimashada.
Baadhitaanka noloshiisa nololeed ee aadamuhu wuxuu rabaa wax qancin kara dhab ahaan baadi goobka naftiisa dhabta ah; aqoonsiga, is-ahaanta iyo A-niska, oo mid kastaaba si liidata ugu miyir qabo, oo dareemayo oo doonayo inuu ogaado. Sidaa darteed Qofka dhabta ah waa in loo aqoonsadaa inuu yahay Is-aqoon, ujeedada dhabta ah ee aan la aqoonsanayn ee raadinta aadanaha. Waa joogtaynta, kaamil ahaanta, dhammaystirka, oo la raadiyay laakiin aan weligeed laga helin xiriirka aadanaha iyo dadaalkiisa. Dheeraad ah, Qofka dhabta ahi waa lataliyaha weligiis jira iyo xaakinka ka hadla qalbiga sida damiirka iyo waajibaadka, sida saxda ah iyo sababaha, sida sharciga iyo cadaalada - la'aanteed ninku wuu ka yaraan lahaa xayawaanka.
Waxaa jira sidan oo kale. Waxay ka mid tahay "Self Triune Self," buuggan oo loogu yeedho maxaa yeelay waa mid ka mid ah unugyada aan la qaybin karin ee saddex midnimada shaqsiyadeed: qayb ka mid ah garbaha, qaybta fekerka, iyo qaybta samaynta. Kaliya qeyb ka mid ah qaybta jilicsan ayaa geli karta jidhka xayawaanka iyo samaynta jidhkaas. Qaybta qaabdhismeedku waxa weeye waxa halkan ku jira ee loo yaqaan 'in-the-body'. Bini'aadam kasta oo ka mid ah jilibku waa qayb aan la kala qaybin oo ka mid ah "Self Triune Self", oo ah qayb ka duwan kuwa kale ee Triune Selves. Fikradda iyo qaybaha garabka mid kastoo isxiga ah wuxuu ku jiraa Ba'an, Runtii Maqnaanshaha, taas oo kufaysa adduunkeena adduunka ee dhalashada iyo dhimashada iyo waqtiga. Jirka-ku-jirka-jirka ayaa gacanta ku haya dareenka iyo jirka; Sidaa daraadeed ma awoodo in ay miyir beeliso xaqiiqada fikradda weligeed ku jirta iyo aqoonta qaybaha uu ka kooban yahay Self Triune. Waxay ka maqantahay; Waxyaalaha qarsoon waxaa iska leh kuwa sharka lahu; Ma aragto wax ka baxsan foomamka ujeedka; waxay ka baqaysaa inay iska xoreeyaan xayawaanka jidhka, oo keligood istaagaan. Marka qofka wax tusinaya uu caddaynayo naftiisa oo diyaar u ah inuu dardar geliyo fekerka macquulnimada, fikradiisa iyo aqoonyahankuba had iyo goor diyaar ayay u tahay inay iftiimiso Jidka toosan ee aqoonta. Hase yeeshee, dhaqdhaqaaqa hindisaha ah ee raadinaya fekerka iyo aqoontu waxay u muuqdaan dibadda. Aqoonsiga, ama xaqiiqda dhabta ah, marwalba wuxuu ahaa qarsoodi ah in laga fikiro bini'aadamka xagga dhaqanka kasta.
Plato, oo laga yaabo inuu yahay kan ugu caansan uguna wakiilka ah falsafada Giriigga, ayaa loo adeegsaday dardaaran u ah kuwa raacsan iskuulkiisa falsafada, Akadeemiyada: "Is ogow naftaada" - gnothi seauton. Qoraalkiisa waxaa ka muuqan lahaa inuu fahamsan yahay shakhsiyadda dhabta ah, in kasta oo ereyada uu isticmaalay midkoodna laguma qorin Ingiriis ahaan wax ka filan "nafta". Plato wuxuu adeegsaday qaab baaritaan oo ku saabsan helitaanka Qofka dhabta ah. Waxaa jira farshaxan weyn oo looga faa’iideysanayo astaamahiisa; soo saarista saameynta cajiibka ah. Qaabkiisa lahjadaha ayaa ah mid fudud oo qoto dheer. Akhristaha maskaxda ka caajiska badan, ee ka doorbidaya in la madadaaliyo halkii uu wax ka baran lahaa, waxay u badan tahay inuu u malayn doono Plato caajis Sida iska cad qaabkiisa lahjad ahaan wuxuu ahaa inuu tababaro maskaxda, inuu awood u yeesho inuu raaco waddo feker, isla markaana uusan ilaawin su'aalaha iyo jawaabaha wadahadalka; mid kalena ma awoodo inuu xukumo gabagabada lagu gaadhay doodaha. Xaqiiqdii, Plato uma jeedin inuu ardayga u soo bandhigo aqoon tiro badan. Waxay u badan tahay inuu damacsanaa inuu edbiyo maskaxda xagga fekerka, si markaa fekerkiisa qofku u noqdo mid iftiimiya oo u horseeda aqoonta mawduuciisa. Tani, habka Socratic, waa nidaam lahjad su'aalo iyo jawaabo caqli badan leh oo haddii la raaco ay hubaal ka caawin doonto qofka inuu barto sida loo fikiro; iyo tababarka maskaxda si aad si fiican ugu fikirto Plato wuxuu qabtay wax ka badan macallimiinta kale. Laakiin ma jiraan wax qoraal ah oo innoo soo degay oo uu ku sheegayo waxa fekerku yahay, ama waxa maskaxdu tahay; ama waxa dhabta ah ee qofku yahay, ama habka aqoonteeda. Mid waa inuu sii eegaa.
Waxbarista qadiimiga ah ee Hindiya waxaa lagu soo koobay bayaanka qarsoodiga ah: "that you are" (tat tvam asi). Waxbaristu ma cadeyneyso, si kastaba ha noqotee, waxa ay tahay "taasi" ama waxa aad tahay "adiga"; ama qaabkee "taas" iyo "adiga" ay isku qaraab yihiin, ama sida loo aqoonsado. Haddana haddii ereyadan macno yeelan doonaan waa in lagu sharxaa qaabab la fahmi karo. Nuxurka falsafada Hindida oo dhan - in aragti guud laga qaato iskuulada maamulaha - waxay umuuqataa in ninku jiro wax aan dhiman karin oo had iyo jeerba ahaa shaqsi qayb ka mid ah isku dhafka ama wax caalami ah, inbadan oo dhibic ah biyaha baddu waa qayb ka mid ah badda, ama sida dhimbiiluhu yahay mid leh ololka uu ku leeyahay asalkiisa iyo ahaanshihiisa; iyo, intaa ka sii dheer, in shaqsigan wax, tan sameeyaha ah - ama, sida loogu yeero iskuulada maamulaha, atman, ama purusha, - laga soocay shay caalami ah oo kaliya indha shareerka dareenka dhalanteedka, maya , Taas oo sababi karta in qofka bina aadamka ahi u maleeyo inuu isagu gooni u yahay iyo shaqsi ahaanba; halka, macallimiintu caddeeyeen, ma jiro shaqsiyad marka laga reebo wax weyn oo caalami ah, oo loo yaqaan Brahman.
Waxbariddu waa, dheeraad ah, in jajabyada ka kooban Brahman-ka caalamiga ah ay dhammaantood ku xiran yihiin jiritaanka aadanaha iyo dhibaato soo wajahday, iyagoo miyir la 'aqoonsigooda loo maleynayo inuu yahay Brahman-ka caalamiga ah; oo ku xidhan shaagagga dhalashada iyo dhimashada iyo dib-u-muujinta dabeecadda, illaa, ka dib da 'dheer ka dib, dhammaan jajabyada si tartiib tartiib ah ayay dib ugu midoobi doonaan caalamiga Brahman. Sababta ama baahida iyo rabitaanka Brahman ee soo martay nidaamkan dhibta iyo xanuunka leh sida jajabka ama dhibcaha ayaan ahayn, si kastaba ha ahaatee, waa la sharaxay. Midkoodna lama tusin sida loo maleynayo in Brahman-ka guud ee adduunka kaamil ah ama looga faa'iideysan karo; ama sida qayb ka mid ah jajabkeedu u macaasho; ama sida dabiiciga looga faa'iideysto. Jiritaanka aadanaha oo dhan wuxuu umuuqdaa dhibaato aan waxtar lahayn oo bilaa sabab iyo sabab la’aan ah.
Si kastaba ha noqotee, waddo ayaa la muujiyaa oo ah shaqsi si fiican u qalma, oo doonaya "go'doomin," ama "ka xoreyn" addoonsiga maskaxda ee hadda jira, waxaa laga yaabaa in dadaal geesinimo leh uu uga baxo cufnaanta, ama dhalanteedka dabiiciga ah, oo uu horay uga sii socdo guud ahaan ka baxsashada dabiiciga. Xorriyadda waa in la helaa, ayaa la yiri, iyada oo loo marayo ku dhaqanka yoga; maxaa yeelay yoga, waxaa la yiraahdaa, fikirka waxaa laga yaabaa inuu edeb yeesho in atman, purusha - qofka sameeyaha ah - uu barto inuu caburiyo ama baabi'iyo dareenkiisa iyo rabitaankiisa, wuxuuna kala firdhiyaa khayaaliga dareenka ah ee fikirkiisu muddo dheer ku xirnaa. ; sidaa awgeedna laga xoreeyay lagama maarmaanka u ah jiritaanka aadanaha, waxaa ugu dambeyntii dib loogu soo celiyay Brahman caalami ah.
Waxyaalahan oo dhan waxaa ku jira astaamo run ah, oo sidaas darteed wax badan oo wanaagsan. Yogi wuxuu runtii bartaa inuu xakameeyo jirkiisa iyo inuu edbiyo dareenkiisa iyo rabitaankiisa. Wuxuu baran karaa inuu xakameeyo dareenkiisa illaa halka uu awoodo, markuu doono, inuu ka feejignaado xaaladaha arrimaha gudaha kuwa sida caadiga ah ay u dareemaan dareemayaasha aadanaha ee aan tababbaran, sidaas awgeedna waxaa suuragal u ah inuu sahmiyo oo uu barto dawladaha dabiiciga ah ee waxyaalaha qarsoon ee aadamaha intiisa badan. Waxa laga yaabaa inuu, intaa ka sii badan, gaadho heer sare oo xoog badan oo xoogagga dabeecadda ah. Kuwaas oo dhammaantood shaki ku jirin inay shakhsiyan ka duwanaanayso tirada badan ee dadka aan edbinta lahayn. Laakiin inkasta oo nidaamka yoga loo adeegsado inuu "xoreeyo," ama "go'doomiyo," is-muujinta naftiisa ka timid dhalanteedyada dareenka, waxay umuuqataa inay cadahay inaysan dhab ahaan waligeed horseedayn mid ka baxsan xayndaabka dabiiciga. Tan waxaa si cad ugu sabab ah ismaandhaaf ku saabsan maskaxda.
Maskaxda lagu barto yoga yog maskaxda, maskaxda. Waa qalab khaas ah oo ka mid ah qoraha lagu sharraxay boggaga dambe sida maskaxda maskaxda, halkaan ka soocay laba miyir oo kale oo aan kala sooc lahayn: maskaxaha dareenka iyo rabitaanka qofka jilicsan. Maskaxda jirka ayaa ah habka kaliya ee ay u shaqeeyaha uqaabilsan ay u shaqeyn karaan dareenkooda. Hawlgallada maskaxda-jirka ayaa si xad dhaaf ah u xaddidan dareennada, oo markaa si adag u ah dabeecadda. Iyada oo loo marayo bini-aadanka oo ka fikiraya caalamka oo ah muuqaalkiisa cajiibka ah: wakhtiga adduunku, ee illoobi kara. Sidaa awgeed, inkasta oo xertu ay xoojisay garashadiisa, haddana isla markiiba waxay caddaynaysaa inuu weli ku tiirsan yahay dareenkiisa, wali wuxuu ku dhex jiraa dabeecadda, isaga oo aan laga saarin baahida sii socota jiritaanka jiritaanka jidhka. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha noqotee, waxa uu noqon karaa mid u shaqeeya mashiinka jirkiisa, oo aan ka sooci karin ama ka xorayn karin dabeecadda, ma garan karo naftiisa ama astaamihiisa dhabta ah, iyada oo la fekerayo maskaxda jirka oo kaliya; Mawduucyadani waa wax qarsoodi ah oo ku saabsan caqliyada, waxaana lagu fahmi karaa oo kaliya iyada oo loo marayo habka saxda ah ee isku-xirnaanta maskaxda-jirka oo leh maskax-darrada iyo rabitaanka.
Uma muuqato in maskaxda dareenka iyo rabitaanka lagu tixgeliyey nidaamyada fikirka Bariga. Caddaynta tan waxaa laga heli karaa afarta buug ee Patanjali's Yoga Aphorisms, iyo faallooyinka kala duwan ee ku saabsan shaqadii hore. Patanjali malaha waa kan ugu qaddarinta badan uguna wakiil ka ah falsafada Hindiya. Qoraalladiisu waa kuwo qoto dheer. Laakiin waxay umuuqataa inay macquul tahay in baristiisa runta ah ama luntay ama qarsoodi noqotay; Sutraatka khiyaanada xeesha dheer ee magaciisa wata ayaa umuuqda inay carqaladeynayaan ama ka dhigayaan wax aan macquul aheyn ujeedka sida gaarka ah loola dan leeyahay. Sidee caqiido noocan oo kale ah u sii jiri karaa iyada oo aan la weydiinin qarniyo badan waa in lagu sharraxaa oo keliya iftiinka waxa ku xusan cutubkan iyo cutubyada dambe ee ku saabsan dareenka iyo rabitaanka aadanaha.
Barista bariga, sida falsafadaha kale, waxay khuseysaa qarsoodiga nafta miyirka leh ee jirka bini'aadamka, iyo qarsoodiga xiriirka ka dhexeeya naftaas iyo jirkiisa, iyo dabeecadda, iyo guud ahaan caalamka. Laakiin macallimiinta Hindida ah ma muujinayaan inay ogyihiin waxa naftiisa miyir-qabka ah - atman, purusha, waxqabadka muuqda - ay tahay, sida looga soocay dabeecadda: ma jiro kala sooc muuqda oo u dhexeeya kan sameeya-jirka iyo jirka oo ah kan dabiiciga ah. Ku guuldareysiga in la arko ama la tilmaamo farqigaan waxaa cad in ay sabab u tahay fikirka guud ee khaldan ama fahamka qaldan ee dareenka iyo rabitaanka. Waa lagama maarmaan in dareenka iyo rabitaanka lagu sharaxo waqtigan.
Fikirka dareenka iyo rabitaanku wuxuu soo bandhigayaa mid ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan iyo kuwa ugu dhow ee ku qoran buuggan. Muhiimaddeeda iyo qiimaha lama dhimi karo. Fahamka iyo isticmaalka dareenka iyo rabitaanku waxay macnaheedu noqon karaa in barta casriga ee horumarka shakhsiga iyo aadanaha; waxay ka xoroobi kartaa kuwa sameeya fekerka been abuurka ah, caqiidooyinka been abuurka ah, yoolalka beenta ah, oo ay ku hayaan mugdiga. Waxay tirtiraysaa caqiido been ah oo muddo dheer la aqbalay; waxa la aaminsan yahay in hadda uu si qotodheer ugu fekerayo fikirka bani'aadamka oo sida muuqata qofna uusan u malaynaynin inuu su'aal ka keenay.
Waa tan: Qof walba waxaa la baray inuu aamino in dareemayaasha jirka ay yihiin shan tiro, dareenkaasina waa mid ka mid ah dareenka. Dareennada, sida lagu sheegay buuggan, waa unugyo dabiici ah, kuwa aasaasi ah, oo miyir qaba sida shaqooyinkooda laakiin aan caqli lahayn. Waxaa jira afar dareen oo keliya: aragga, maqalka, dhadhanka, iyo urta; dareen walbana waxaa ku jira xubin gaar ah; laakiin ma jiro xubin gaar ah oo la dareemo maxaa yeelay dareenka - in kasta oo laga dareemo jidhka - ma aha jidhka, mana aha dabeecadda. Waa mid ka mid ah labada weji ee sameeyaha. Xayawaanku sidoo kale waxay leeyihiin dareen iyo rabitaan, laakiin xayawaanku waa wax ka beddelidda bini-aadamka, sida lagu sharraxay goor dambe.
Sidoo kale waa in lagu sheegaa rabitaanka, dhinaca kale ee fuliyaha. Dareemidda iyo rabitaanka waa in mar walba la tixgeliyaa, sababtoo ah way kala qaybsamaan; mana jiri karo cid kale; waxay u eg yihiin labada sir ah ee korontada, labada dhinac ee lacagta. Sidaa daraadeed buugani wuxuu isticmaalayaa ereyga dhexdhexaadka ah: dareen-iyo-rabitaan.
Dareemidda-iyo-rabitaanka ee waxqabadka waa awoodda caqliga ah ee dabiiciga ah iyo dareenka la dhaqaajiyo. Waxay ku jirtaa tamarta hal-abuurka ah ee meel kasta joogta; iyada oo aan dhammaan noloshu istaagi lahayd. Dareemidda-iyo-doonista waa falsafadda bilowga ah ee aan dhammaadka laheyn oo wax kasta oo la arko, loo maleynayo, la sameeyay, la kiciyay, lana xakameynayo, ha ahaado hay'ad samafal ah oo ka tirsan hay'adaha bini'aadamka ama kuwa ka tirsan Dawlada Aduunka, ama Sirdoonka weyn. Dareemidda-iyo-rabitaanku wuxuu ku jiraa dhammaan howlaha caqliga leh.
Jirka bini'aadamka, dareenka-iyo rabitaanku waa awoodda miyir-qabka ah ee ku shaqeysa mashiinkan dabeecadda shaqsiyeed. Mid ka mid ah afarta dareen - ma dareemo. Dareemida, wajiga dhaqdhaqaaqa ee qofka sameeya, waa midka jirka oo dareemaya, oo dareemaya jirka oo dareemaya dareemo ay jirka ugu gudbiyaan afarta dareemayaal, sida dareemo. Dheeraad ah, waxay ku kala duwanaan kartaa darajooyin kala duwan oo dareemi kara aragtiyo sarre, sida niyadda, jawiga, saadaalinta; way dareemi kartaa waxa saxda iyo waxa qaldan, waxayna dareemi kartaa digniinta damiirka. Rabitaan, dhinaca firfircoon, waa awoodda miyir-qabka ah ee jirka ku dhaqaajisa fulinta ujeeddada qofka sameeyaha ah. Qofka wax qabanayaa wuxuu isla mar ka shaqeeyaa labada dhinacba: sidaas darteed rabitaan kasta wuxuu ka yimaadaa dareen, dareen walbana wuxuu keenaa rabitaan.
Waxaad qaadan doontaa talaabo muhiim ah habka aad u ogaan karto is-baddelida is-jirka ee jirka markaad ka fikirto naftaada sida dareenka akhlaaq-darrada ah ee ku jira nidaamka dareen-celinta ee iskaa-wax-u-qabsashada, ka duwanaanta jirka oo aad dareentid, isla mar ahaantaana awoodda miyirka oo damacnimada iyo dhiiggaba lagaga adkaado. Dareemidda-iyo-doonista waa inay keenaan afarta dareen. Fahamka goobta iyo shaqada dareen-iyo-rabitaanku waa dhibka ka yimaada aaminaadda kuwaas oo da'doodu tahay da 'yartu waxay sababtay inay sameeyaan dadku inay naftooda u fikiraan oo keliya naftooda. Iyada oo fahamkani yahay dareen-iyo-rabitaan ee bini-aadanka, falsafadda Hindiya ayaa hadda la sii wadi karaa iyada oo la cusbooneysiinayo.
Barista bariga waxay aqoonsan tahay xaqiiqda ah in si loo gaaro aqoonta miyir qabka jirka, qofku waa in laga xoreeyo dhalanteedyada dareenka, iyo fekerka beenta ah iyo ficilka ka dhasha ku guuldareysiga inuu xakameeyo dareenkiisa iyo rabitaankiisa . Laakiin kama gudbeyso fikirka khaldan ee guud ee ah in dareenku yahay mid ka mid ah dareenka jirka. Taas bedelkeeda, macallimiintu waxay sheegaan in taabashada ama dareemidu ay tahay dareen shanaad; damacaasuna waa jidhka. iyo in dareenka iyo rabitaankuba yihiin waxyaabo dabiici ah oo jidhka ku jira. Marka loo eego mala-awaalkan waxaa lagu doodayaa in purusha, ama atman - wax qabad muuqda, dareen-iyo-rabitaan - ay tahay inay gebi ahaanba cabudhiso dareenka, waana inay gebi ahaanba baabi'isaa, "disho," rabitaanka.
Marka la eego waxa halkan lagu muujiyay ee ku saabsan dareen-iyo-rabitaan, waxay u egtahay in barashada Bariga ay kula talinayso wax aan macquul aheyn. Qofka aan nooleyn ee aan nooleyn ee jidhka ah naftiisa iskama hallayn karo. Haddii ay suurtagal tahay in jidhka bini'aadanku uu ku noolaado isagoo aan lahayn dareen iyo rabitaan, jidhku wuxuu noqon karaa neefsasho aan macquul ahayn.
Marka laga soo tago fahamkooda khaldan ee dareenka-iyo rabitaanka macallimiinta Hindida ah wax caddeyn ah uma hayaan inay leeyihiin aqoon ama faham ku saabsan Is-gacan-qabsiga Saddex-geesoodka ah. Oraahda aan la sharraxin: "adigu waxaad tahay," waa in laga soo qaadaa in "adiga" ee wax laga qabanayaa uu yahay atman, purusha - shakhsiga ku suntan naftiisa; iyo in "taas" taas oo ah "adiga" sidaas lagu gartay ay tahay shakhsiyadda guud, Brahman. Ma jiro farqi u dhexeeya kan sameeya iyo jidhkiisa; iyo sidoo kale waxaa jira guuldarro u dhiganta oo lagu kala soocayo Brahman-ka caalamiga ah iyo dabeecadda caalamiga ah. Iyadoo loo marayo caqiidada Brahman caalami ah oo ah isha iyo dhammaadka dhammaan shakhsiyaadka shakhsiyadeed, malaayiin dad sameeyayaal ah ayaa lagu hayaa jaahilnimada Naftooda dhabta ah; iyo waliba intaa ka dib waxay filayaan, xitaa inay hamiyaan, inay ku lumiyaan guud ahaan Brahman taas oo ah waxa ugu qaalisan ee qof walba uu lahaan karo: aqoonsiga dhabta ah ee qofka, qofka shaqsiyan u gaarka ah ee weyn, iyo shakhsiyaadka kale ee aan dhiman.
Inkasta oo ay cadahay in falsafadda Bariga u egtahay in ay ilaaliso dabeecadda ku xiran dabeecadda, iyo jaahilnimada dhabta ah, waxay u muuqataa mid aan macquul ahayn oo aan macquul ahayn in barashadani ay uuraysan karto jaahilnimada; in laga yaabo in ay ku sii jiri lahaayeen iyadoo ujeedadu tahay in dadka laga ilaaliyo runta, iyo sida hoos loogu dhigo. Taas macnaheedu waxa weeye in qaababka hadda jira, si kastaba ha ahaatee waayadii hore ay ahaayeen, waxay yihiin oo keliya hadhaaga dabiiciga ah ee nidaam aad u weyn oo ka soo degay ilbaxnimo oo la waayey oo ku dhowaad illowday: waxbarid laga yaabo in uu si cad u iftiiminayo; taas oo si macquul ah loo aqoonsan yahay dareen-iyo-rabitaan sida jilicsanaanta-jirka-jirka; taas oo tusinaysa jilbaha jidka aqoonta dhabta ah. Qaababka guud ee foomamka hadda jira waxay soo jeedinayaan suurtogalnimada; iyo in xilliyada da 'yarta macallinimada asalka ah ay si qoto dheer u siiyeen habka barashada Brahman caalamiga ah iyo caqiidooyinka maskaxda ah ee ka baxaya dareenka aan dhiman-iyo-rabitaanka sida wax aan la diideyn karin.
Waxaa jira hanti aan gebi ahaanba qarsooneyn: The Bhagavad Gita, oo ah tan ugu qaalisan ee dahabka Hindiya. Waa luulka Hindiya qiime ka baxsan. Runta uu Krishna siiyay Arjuna waa heer sare, qurux badan, oo weligeed ah. Laakiin muddada fog ee taariikheed ee riwaayadda la dejinayo laguna lug yeelanayo, iyo caqiidooyinka qadiimiga ah ee Vedic-ka ah ee xaqiiqooyinkeeda la huwiyay oo la huwiyay, ayaa aad noogu adag inaynaan fahmin waxa ay yihiin jilayaasha Krishna iyo Arjuna; sida ay isku qaraabo yihiin; waa maxay xafiiska mid waliba kan kale, gudaha ama ka ahaanshaha jirka. Waxbarista xariiqyadan sida xushmadda leh loo sharraxay ayaa macno buuxa leh, waxayna noqon kartaa qiimo weyn. Laakiin waxaa lagu qasan yahay oo lagu daboolay fiqiga qadiimiga ah iyo caqiidooyinka Qorniinka in muhiimada ay leedahay ay gebi ahaanba qarsoon tahay, qiimihiisa dhabta ahna sidaas lagu qiimeeyay.
Sababtoo ah la'aanta guud ee hufnaanta falsafadda Bariga, iyo xaqiiqda ah inay u muuqato inay is-khilaafsan tahay hage u ah aqoonta naftiisa ee jirka iyo Qofnimada dhabta ah, barashada qadiimiga ah ee Hindiya waxay umuuqataa mid shaki leh oo aan la isku halleyn karin . Mid wuxuu ku noqdaa Galbeedka.
Ku saabsan masiixiyaadka: Asalka dhabta ah iyo taariikhda Masiixiyaddu waa wax aan qarsoodi ahayn. Suugaanta baaxada leh ayaa kor u kacday qarniyo badan oo dadaal ah si ay u sharaxdo waxa ay waxbarashadu yihiin, ama waxa asal ahaan loogu talagalay inay noqdaan. Laga soo bilaabo wakhtiyadii ugu horraysay waxaa jira waxbarid wax badan oo ku saabsan cilmiga; laakiin wax qoritaan ah ma soo muuqdaan kuwaas oo muujinaya aqoonta waxa dhab ahaantii loogu talagalay iyo baray bilowgii.
Masalooyinka iyo odhaahyada ku jira Injiillada waxay daliil u yihiin weynaan, fududaan, iyo run. Haddana xitaa kuwa farriinta cusub markii ugu horreysay la siiyay waxay umuuqdaan kuwa aan fahmin. Buugaagtu waa toos, looma jeedin in lagu marin habaabiyo; laakiin isla mar ahaantaana ay sheegaan in uu jiro macno gudaha ah oo loogu talagalay kuwa la doortay; waxbarid qarsoodi ah oo aan loogu talagalin qof walba laakiin loogu talagalay "kuwa rumaysan". Xaqiiqdii, buugaagta waxaa ka buuxa qarsoodi; waana in loo maleeyaa inay huwan yihiin waxbarid ay ogaayeen in yar oo bilaabatay. Aabaha, Wiilka, Ruuxa Quduuska ah: kuwani waa qarsoodi. Qarsoodiga, sidoo kale, waa rimidda nadiifka ah iyo dhalashada iyo nolosha Ciise; sidoo kale iskutallaabta lagu qodbay, dhimashadiisa, iyo sarakiciddiisa. Waxyaabaha qarsoon, shaki la'aan, waa jannada iyo cadaabta, iyo sheydaanka, iyo boqortooyada llaah; waayo waxay u egtahay inay yar tahay in maadooyinkan loola jeeday in lagu fahmo xagga dareenka, halkii ay ka ahaan lahaayeen calaamado. Intaa waxaa dheer, buugaagta oo dhan waxaa ku jira weedho iyo ereyo aan si cad loo qaadan karin si macno ahaan ah, laakiin loo leeyahay si macquul ah; iyo kuwa kale oo si cad u yeelan kara muhiimad kaliya kooxaha la xushay. Dheeraad ah, macquul maahan in loo maleeyo in masalooyinka iyo mucjisooyinka ay la xiriireen run ahaan suugaaneed. Qarsoodiga oo dhan - laakiin meelna laguma sheegin waxyaalaha qarsoon. Waa maxay waxan oo dhan?
Ujeedada muuqata ee Injiillada ayaa ah in la baro fahamka iyo ku noolaanshaha nolosha gudaha; nolol gudaha ah oo dib u cusbooneysiin doonta jidhka bini'aadamka oo markaa ka adkaan doonta dhimashada, dib ugu soo celinta jirka jireed nolosha weligeed ah, gobolka laga sheegayo inuu ka dhacay - "dhicitaankeeda" oo ah "dembigii asalka ahaa." Waqti waa hubaal inay jirto nidaam qeexan oo tilmaam ah kaas oo caddayn lahaa sida saxda ah ee qofku ugu noolaan karo noloshaas gudaha ah: sida qofku isagoo sidaas samaynaya, ugu yimaado aqoonta Qofkiisa dhabta ah. Jiritaanka barashada noocan oo kale ah ee qarsoodiga ah waxaa lagu soo jeediyay qoraalladii hore ee Masiixiyiinta iyada oo la tixraacayo siraha iyo waxyaalaha qarsoon. Intaa waxaa sii dheer waxay umuuqataa inay cadahay in maahmaahyadu ay yihiin sheegashooyin, isku ekaysiin: sheekooyin guriyeed iyo tirooyin hadal ah, oo u adeegaya sidii gawaarida loogu talagalay gudbinta kaliya tusaalooyinka anshaxa iyo cilmiga anshaxa, laakiin sidoo kale runta gudaha ah, runta weligeed ah sida qaybo nidaam qeexan oo tilmaam ah Si kastaba ha noqotee, Injiillada, sida ay maanta yihiin, ayaa ka maqan isku xirnaanta loo baahan lahaa si loo dejiyo nidaam; waxa inagu soo degay kuma filna. Iyo, wixii ku saabsan waxyaalaha qarsoon ee ay ahayd in waxbarista noocaas ah loo maleeyo in lagu qariyey, ma jiro fure ama koodh la yaqaan oo nala siiyay oo aan ku furi karno ama ku sharxi karno.
Muujinta ugu macquulsan uguna macquulsan ee caqiidooyinka hore ee aan ognahay waa Bawlos. Erayada uu adeegsaday waxay uga dan lahaayeen inay macnihiisa u caddeeyaan kuwa lala hadlay; laakiin hada qoraaladiisa waxay u baahan yihiin in loo fasiro iyadoo la eegayo maanta. "Warqadda Koowaad ee Bawlos ee dadka Korintos," cutubka shan iyo tobnaad, waxay tilmaamaysaa oo xasuusinaysaa waxbarida qaarkood; tilmaamo la hubo oo ku saabsan nolosha nolosha gudaha. Laakiin waa in loo qaataa in waxbaristaas midkoodna aan loo heelin qorista - taas oo umuuqata mid la fahmi karo - ama haddii kale ay luntay ama laga tagay qoraalladii soo degay. Dhacdooyinka oo dhan, "Jidka" lama muujiyo.
Maxay ahaayeen xaqiiqooyinka la siiyay qaabka qarsoodiga ah? Sababta waxay noqon laheyd in sharciyada xilliga ay mamnuucayaan fidinta caqiidooyinka cusub. Dhiirigelinta macallin shisheeye ah ama caqiido ayaa la ciqaabi karaa dhimasho. Run ahaantii, halyeeyga waa in Ciise uu ku dhinto dhimashada isaga oo iskutallaab ku ah waxbaristiisa runta iyo jidka iyo nolosha.
Laakiin maanta, waxaa la yiraahdaa, waxaa jira xorriyadda hadalka: qofku wuxuu sheegi karaa isagoon ka baqayn geeri wuxuu rumeysan yahay oo ku saabsan waxyaalaha qarsoon ee nolosha. Waxa qof kasta u maleeyo ama ka ogyahay dastuurka iyo shaqada jidhka bini'aadamka iyo nafta miyir qabka ah ee ku dhex nool, runta ama fikradaha laga yaabo inuu qofku ka yeesho xiriirka u dhexeeya qofka is muujiyey iyo Iskiis dhabta ah, iyo habka aqoonta. - kuwani uma baahna in la qariyo, maanta, ereyo qarsoodi ah oo u baahan fure ama koodh fahamkooda. Waqtiyadan casriga ah dhammaan "tilmaamaha" iyo "indhoolayaasha," dhammaan "qarsoodiga" iyo "bilaabidda," luqadda qarsoodiga ah ee gaarka ah, waa inay caddeyn u tahay jaahilnimo, madax-bannaanid, ama ganacsi diidmo ah.
Iyadoo aan loo eegin khaladaadka iyo kala qaybinta iyo jihada diinta; inkasta oo tafsiiro kala duwan oo ka mid ah caqiidooyinkooda qarsoodi ah, Masiixiyadda ayaa ku faafay dhammaan qaybaha adduunka. Waxaa laga yaabaa inay ka badan tahay iimaan kasta oo kale, waxbaristiisa ayaa ka caawisay inay bedesho adduunka. Waa inay jiraan xaqiiqooyin ku saabsan waxbarista, si kastaba ha ahaatee waa la qarin karaa, taas oo, ku dhawaad ​​laba kun oo sano, waxay gaadheen qalbiga aadanaha waxayna tooseen bani-aadmiga.
Xaqiiqada rasmiga ahi waxay ka dhalataa bani-aadmiga, bini-aadannimada oo ah wadarta guud ee dhammaan dadka ku shaqeeya jirka. Xaqiiqooyinkan looma ciqaabi karo ama la illoobi karo. Wixii da 'kasta oo jira, falsafad kasta ama rumaysad kasta, runta ayaa soo muuqan doonta oo dib u arki doonta, wax kastoo foomamka isbedelaya.
Hal nooc oo xaqiiqooyinkaas qaarkood lagu tuuray ayaa ah Freemasonry. Amarka Masoniga waa mid duug ah sida aadanaha. Waxay leedahay waxbaris qiimo weyn leh; aad uga weyn, xaqiiqdii, sida ay u qadarinayaan Masaajidayaasha iyagu masuulka ka ah. Amarku wuxuu kaydiyey qaybo qadiimi ah oo macluumaad qaali ah oo ku saabsan dhismaha jir daa'im ah oo loogu talagalay qof si miyir leh u dhiman karin. Riwaayaddeeda qarsoodiga ah waxay ka hadlaysaa dib u dhiska macbudkii la dumiyey. Tani waa mid aad u muhiim ah. Macbudku waa astaanta jidhka bini'aadamka ee ninku waa inuu dib u dhisaa, dib u cusboonaysiiyaa, jidh jidheed oo weligiis waara, weligiisna ahaada; jidh u noqon doona hoy ku habboon kan markaa miyir-qabka aan dhimanayn. "Ereyga" oo "lumay" waa ficilka, ku lumay jidhkiisa bini'aadamka - burburka macbudkii mar weyn jiray; laakiin taas oo is arki doonta maadaama jidhku cusboonaysiiyay oo sameeyahu uu isagu xukumayo.
Buugani wuxuu kuu keenayaa Iftiin badan, Iftiin ka sii badan fikirkaaga; Iftiin si aad uga hesho "Jidkaaga" nolosha. Iftiinka uu keeno, hase yeeshee, ma aha iftiinka dabeecadda; waa Iftiin cusub; cusub, maxaa yeelay, in kasta oo ay goobjoog ahayd adiga, haddana ma ogid Boggan waxaa loogu magac daray Iftiinka Miyir-qabka ee ku jira; waa Iftiinka oo wax ku tusi kara sida ay yihiin, Iftiinka Sirdoonka ee aad xiriirka la leedahay. Sababtoo ah joogitaanka Iftiinkaan ayaad awoodi kartaa inaad ka fikirto abuurista fikradaha; fikradaha inay kugu xidhaan walxaha dabiiciga ah, ama inay kaa xoreeyaan waxyaalaha dabiiciga ah, sida aad doorato oo aad rabto. Fikirka dhabta ahi waa haynta joogtada ah iyo diirada saarista Iftiinka Miyirka ee ku jira mawduuca fikirka. Fikirkaaga adigu waxaad kadhigeysaa masiirkaaga. Fikirka saxda ahi waa wadada lagu maro aqoonta naftaada. Taas oo ku tusin karta wadada, kuna hogaamin karta jidkaaga, waa Iftiinka Sirdoonka, Iftiinka miyir qabka ah ee ku jira. Cutubyada dambe waxaa lagu sheegayaa sida Iftiinka loo adeegsanayo si loo helo Iftiin badan.
Buuggu wuxuu tusinayaa in fikradu yihiin waxyaabo dhab ah, dhabta ah. Waxyaabaha kaliya ee dhabta ah ee qofka abuuraa waa fikirkiisa. Buuggu wuxuu tusinayaa hababka maskaxda ee fikradaha la abuuray; iyo in fekrado badani ay ka sii badan yihiin jirka ama maskaxda iyadoo loo abuurayo. Waxay muujinaysaa in fikradaha uu u malaynayo inuu yahay kartida, daabacadaha buluugga ah, naqshadaha, moodooyinka uu ka kooban yahay waxyaabo la taaban karo oo uu ku beddelay wejiga dabeecadda, wuxuuna sameeyay waxa loo yaqaan habkiisa noloshiisa iyo ilbaxnimada. Fikradaha waa fikradaha ama foomamka ka baxsan taas oo ay ku dheehan tahay taariikhihii oo la dhisay oo la dayacay oo la burburiyey. Buuggu wuxuu sharraxayaa sida fikradaha aan la garanaynin ee ka muuqda sida falalka iyo walxaha iyo dhacdooyinka noloshiisa gaarka ah iyo midda wadajirka ah, oo abuuraya jaangiisa noloshiisa ka dib nolosha dunida. Laakiin sidoo kale waxay muujinaysaa sida ninku u baran karo fikirka isagoo aan abuurin fikrado, sidaas darteedna wuxuu xakameynayaa jihadiisa.
Maskaxda erayga sida caadiga ah loo isticmaalo waa ereyga oo dhan oo loo dhan yahay oo loo sameeyey si loo daboolo dhammaan noocyada fikirka, si aan kala sooc lahayn. Guud ahaan waxaa la aaminsan yahay in nin leeyahay hal maskax kaliya. Dhab ahaan saddex maskaxeed oo kala duwan, taas oo ah, siyaabo aad ku fekereyso Nuurka Cadaan, ayaa loo isticmaalaa sida uu u shaqeeyo. Kuwani, ee hore loo soo sheegay, waa: maskaxda jirka, maskaxda dareenka, iyo rabitaanka maskaxda. Mind waa shaqaynta arrimaha caqliga leh. Sidaa darteed maskaxdu ma shaqeynayso si madaxbannaan. Waxqabadka mid kasta oo ka mid ah saddexda maskaxeed waxay ku xiran tahay dareenka dareenka-iyo-rabitaanka, qirashada.
Maskaxda jirka waa tan sida caadiga ah looga hadlo sida maskaxda, ama caqliga. Waa shaqaynta dareemada iyo rabitaanka sida dhaqdhaqaaqa jirka, sida mashiinka mashiinka jirka bani-aadmiga ah, halkanna waxaa lagu magacaabaa maskaxda jirka. Waa maskaxda kaliya ee loo jiheeyey, taasina waxay ku dhaqmaysaa marxaladda iyo dareenka jirka. Sidaa daraadeed waa qalab ayadoo loo eegayo kan waxqabadka uu yahay mid miyir qabo oo laga yaabo in uu ku dhaqmo iyo gudaha iyo iyada oo loo marayo arimaha adduunka.
Maskax-dareenka iyo rabitaanka-maskaxdu waa hawlaha dareenka iyo rabitaanka iyada oo aan loo eegin ama lala xidhiidhin aduunka oo jir ahaaneed. Labadan maskaxeed waxay ku dhow yihiin gebi ahaanba, waxaana la xakameynayaa, waxaana hoos yimaada maskaxda jirka. Sidaa daraadeed, ficillada bani-aadmiga oo dhan waa la sameeyay si loo waafajiyo fekerka maskaxda, kaas oo xiriiriyaha dabiiciga ah ku xiran oo ka hortagaya fikirkiisa naftiisa oo ka mid ah wax ka duwan jirka.
Taas oo maanta la yiraahdo cilmi nafsi maahan saynis. Cilmi-nafsiga casriga ah waxaa loo qeexay sida daraasadda dabeecadda aadanaha. Tani waa in loola jeedaa in ay tahay daraasad ku saabsan riyooyinka ka soo baxa shayada iyo awoodda dabiiciga ah ee lagu sameeyey dareenka habka bani-aadmiga, iyo jawaabta habka bani-aadmiga ah ee riyooyinka sidan loo helay. Laakiin taasi ma aha cilmi nafsi.
Ma jiri karo nooc kasta oo cilmi-nafsi ah sida sayniska, illaa uu jiro nooc ka mid ah fahamka waxa maskaxda ah, iyo waxa maskaxdu tahay; iyo xaqiiqada geeddi-socodka fikradda, sida maskaxdu u shaqeyso, iyo sababaha iyo natiijooyinka shaqadooda. Cilmi-nafsi yaqaanka ayaa qirtay inaysan garanaynin waxyaalahaasu yihiin. Ka hor inta cilmu-baaristu ay noqon karto saynis dhab ah, waa in ay faham u tahay hawlaha isku xiran ee saddexda maskaxeed. Tani waa aasaaska oo lagu horumarin karo saynis dhab ah oo maskaxda iyo xidhiidhka aadanaha. Boggagaan waxaa lagu muujiyey sida dareenka iyo rabitaanku ay si toos ah ula xiriiraan jinsiyadaha, sharaxaya in qofku dareemayo riwaayad ay ku badan tahay rabitaankiisa iyo in haweeneyda ay rabaan inay rabaan; iyo in qof kasta oo bini'aadamku ka shaqeeyo miisaanka maskaxda ee hadda jira aadka ugu dhawaa midka ama kan kale, sida ku cad jinsiga jirka ee ay ku shaqeynayaan; iyo waxaa la muujiyey, in dheeraad ah, in dhammaan xidhiidhada aadanaha ay ku tiirsan yihiin hawsha maskaxda ee ragga iyo haweenka ee xiriirka ay la leeyihiin.
Khubarada cilmu-nafsiga ee casriga ahi waxay doorbidaan inaysan adeegsan erayga naf, in kasta oo qarniyaal badan laga isticmaali jiray afka Ingiriiska. Sababta tan ayaa ah in dhammaan wixii laga sheegay ee ku saabsan waxa ay naftu tahay ama waxay qabato, ama ujeedada ay u adeegto, ay ahayd mid aan aad u caddayn, shaki badan iyo wareer, si loogu oggolaado daraasadda sayniska ee mawduuca. Taa baddalkeeda, khubarada cilmu-nafsiga ayaa sidaas darteed u qaatay mawduucooda daraasaddooda mashiinka xayawaanka aadanaha iyo dhaqankiisa. Muddo dheer ayaa la fahmay oo ay isku raacsan yihiin dadku guud ahaan, hase yeeshe, in ninku ka kooban yahay "jidh, naf, iyo ruux." Qofna shaki kama qabo in jirku yahay noole xayawaan ah; laakiin xagga ruuxa iyo nafta waxaa jiray hubaal la'aan iyo mala awaal badan. Mawduucyadan muhiimka ah buugani waa mid cad.
Buuggu wuxuu muujinayaa in nafta nool ay tahay xaqiiqo dhab ah oo suugaaneed. Waxay muujineysaa in ujeedkeeda iyo sida ay u shaqeysaa ay muhiimad weyn ugu leeyihiin qorshaha guud, isla markaana aan la burburin karin. Waxaa lagu sharaxay in waxa loogu yeero nafta ay tahay unug dabiici ah - aasaasi ah, unuga curiye; iyo in tan miyir-qabka ah laakiin aan caqliga lahayn ay tahay tan ugu fog uguna horumarsan dhammaan qaybaha dabeecadda ee ka kooban jirka: waa unugga asaasiga ah ee aasaasiga ah ee hay'adda jirka, isagoo u gudubtay howshaas ka dib tababar dheer oo uu ku qaadanayay shaqooyin tiro yar oo tiro yar dabeecadda ka kooban. Iyada oo ay sidaas tahay wadarta dhammaan sharciyada dabeecadda, cutubkani wuxuu u qalmaa inuu u dhaqmo sidii maamule guud oo otomaatig ah ee dabiiciga ah ee habka jirka aadanaha; sida oo kale waxay u adeegtaa qofka aan dhimanin iyada oo loo marayo dhammaan dib-u-soo-noolaynteeda iyada oo xilli-xilliyeed loo dhiso jidh jidh cusub oo sameeyaha ah si uu u soo galo, iyo dayactirka iyo hagaajinta jidhkaas illaa iyo inta masiirka qofka sameeyaa u baahan karo, sida uu go'aamiyo qofka sameeyaha ah fikirka.
Cutubkani waxaa loogu yeedhaa qaabka neefta. Nidaamka firfircoon ee neefta waa neefta; neeftu waa nolosha, ruuxa, jidhka; waxay ka dhigtaa dhismaha oo dhan. Nooca kale ee qaabka neefsashada, qaabka isdhaafka ah, qaabka ama qaabka, qaabka, qaabka, caaryada, sida ay tahay qaabdhismeedka jireed ee loo dhisay muuqaal, muuqaal la taaban karo by ficilka neefta. Sidaa daraadeed labada qaybood ee qaabka neefta waxay u taagan yihiin nolol iyo foom, qaab dhismeedka ayaa jira.
Sidaas darteed bayaanku wuxuu ka kooban yahay jirka, nafta, iyo ruuxa si fudud loo fahmi karo macnaheedu waa in jirka jirku ka kooban yahay arrin guud; in ruuxu yahay nolosha jirka, neefta nool, neefta nolosha; iyo in nafta uu yahay qaabka gudaha, qaabka aan dhammeystirnayn, qaab dhismeedka muuqaalka leh; oo sidaas daraaddeed nafta nool ayaa abid u ah qaab nololeed, oo qaabeeya, u dayac tiran, dayactirka, iyo dib u dhiska jidhka jidhkiisa.
Nooca neefsashada, marxaladaha qaarkood ee shaqadooda, waxaa ka mid ah cilmi-nafsiyeedka uu ku xardhay maskaxda miyir-qabka, iyo miyir-beelka. Waxay maamushaa nidaamka habdhiska dareenka ah. Shaqadani waxay u shaqeyneysaa sida ay muujinayso aragtida ay ka hesho dabeecadda. Waxa kale oo uu sameeyaa dhaqdhaqaaqa tabaruca ah ee jidhka, sida ku xusan fekerka jidhka. Sidaa daraadeed waxay u shaqeysaa sida dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo shisheeye aan dhimanayn ee jirka; automaton indho la'aan ah oo ka jawaabeysa saameynta shayada iyo xoogagga dabeecadda, iyo fekerka qofka wax gala.
Jirkaaga macno ahaan waa natiijada fikirkaaga. Wax kastoo ay muujin karto caafimaad ama cudur, waxaad uga dhigaysaa sidaas fikirkaaga iyo dareenkaaga iyo rabitaankaaga. Jirkaaga jir ahaaneed ee hadda jira ayaa dhab ahaan ah muujinta naftaada aan halaabi karin, qaabka neeftaada; sidaas darteed waa dib-u-dhigid fikradaha nolosha badan. Waa diiwaan muuqda oo ah fekerkaaga iyo ficil ahaan sidii wax qabad, illaa iyo hadda. Xaqiiqadan waxaa kujira jeermiga jirka kaamil ahaanshihiisa iyo dhimashadiisa.
Ma jiro wax aad u liita maanta fikradda ah in nin uu maalin uun heli doono dhimashada miyir la'aanta ah; in uu ugu dambayntii dib u soo celin doono xaalad kaamil ah oo uu asal ahaan ka soo dhacay. Waxbarashada noocan oo kale ah ee noocyo kala duwan ayaa guud ahaan joogta Galbeedka muddo ku dhowaad laba kun oo sano. Inta lagu jiro wakhtigaas wuxuu ku faafay adduunka si ay boqolaal malyan oo dad ah, oo dib loogu soo celiyo dhulka illaa qarniyo, ayaa loo soo gudbiyay fikrado isdaba-joog ah oo ay ka mid yihiin runta dhabta ah ee la xiray. Inkastoo ay jirto weli faham yar oo ku saabsan, haddana wali ka sii fekerayo waxa ku saabsan; inkasta oo loo geystay inuu ku qanco dareenka iyo rabitaanka dadka kala duwan; iyo inkasta oo laga yaabo in loo eego maanta oo kala duwanaansho la'aan, miisaan, ama cabsida dareenka ah, fekerku waa qayb ka mid ah qaabka guud ee maanta ee bani'aadamnimada, sidaas darteedna wuxuu u qalmaa tixgelinta fikirka leh.
Qoraallada qaarkood ee buuggan, si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqanayaan inay u muuqdaan kuwo cajab ah, xitaa cajiib ah, illaa inta fikradda la siiyo iyaga. Tusaale ahaan: fikradda ah in jidhka jidh ahaaneed ee jidh ahaaneed loo samayn karo mid aan la heli karin, weligiis; waxaa laga yaabaa in dib loo soo celiyo oo lagu soo celiyo xaalad nololeed oo wanaagsan iyo nolol weligeed ah oo uu ka soo horjeedo qofka wax dila. iyo, intaa ka sii dheer, fikradda ah in xaaladda nolosha iyo nolosha weligeed ah waa in la helaa, maaha dhimasho, oo aan ahayn mid aad u fog oo laga yaabo inan soo socda, laakiin adduunka jir ahaaneed marka uu nool yahay. Tani waxay runtii u muuqan kartaa mid aad u qosol badan, laakiin marka la eego caqli ahaan uma muuqato mid aan macquul ahayn.
Waa maxay macquul maahan in jidhka jidhka dadku uu dhinto; wali maaha caqli-gal ahayn waa soo jeedinta ah in kaliya ay dhimanayso qofku weligiis noolaan karo. Cilmi-baadhayaashu waxay qabaan waqti dambe oo sheegaya inaysan jirin wax sabab u ah nolosha jidhka ee aan loo baahnayn in la sii dheeraado, inkastoo ayan soo jeedineynin sida tan loo fulin lahaa. Dhab ahaan, jidhka bani'aadamku had iyo goor baa lagu diley dhimasho; laakiin waxay u dhintaan sababtoo ah ma jirto dadaal macquul ah oo lagu soo celinayo iyaga. Buugan, cutubka Waddada Weyn, waxaa lagu sheegay sida jidhka loo cusbooneysiin karo, loo soo celin karo xaalad dhammaystiran oo macquul ah oo macbudka loogu talagalay Self Triune oo dhamaystiran.
Awoodda galmada waa qarsoodi kale oo ay tahay inuu ninku xalliyo. Waa inay noqotaa duco. Taabadalkeed, bini aadamku badanaa wuxuu kadhigaa cadawgiisa, sheydaankiisa, taas oo waligiis lajirta isaga oo uusan ka baxsan karin. Buugani wuxuu muujinayaa sida, feker ahaan, loogu isticmaalo awood weyn oo wanaag ah oo ay ahayd; iyo sida fahamka iyo is-xakamaynta dib loogu cusbooneysiiyo jirka loona fuliyo himilooyinka iyo himilooyinka weligood ee heerarka horumarka leh ee waxqabadka.
Qof kasta oo bani aadam ah waa qarsoodi labalaab ah: qarsoodiga naftiisa, iyo qarsoodiga jidhka ee uu ku jiro. Wuxuu leeyahay oo uu yahay qufulka iyo furaha qarsoodiga labalaabka ah. Jidhku waa qufulka, isaguna waa furaha qufulka. Ujeedada buugani waa in aan kuu sheego sida loo fahmo naftaada sida furaha qarsoodiga naftaada; sida loo helo naftaada jirka; sida loo helo oo loo ogaado naftaada dhabta ah sida is-aqoon; sida aad adigu ugu adeegsan laheyd furaha furitaanka qufulka jirkaaga; iyo, jirkaaga, sida loo fahmo loona ogaado qarsoodiga dabiiciga. Waxaad ku jirtaa, oo aad tahay hawl wadeenka, mashiinka jirka shaqsiyeed ee dabiiciga ah; waxay ku shaqeysaa waxna ka qabataa oo la xiriirtaa dabeecadda. Markaad xalliso qarsoodiga naftaada sida sameeyaha Aqoontaada iyo hawlwadeenka mashiinka jirkaaga, waxaad ogaan doontaa - faahfaahin kasta iyo guud ahaanba - in shaqooyinka unugyada jirkaagu ay yihiin sharciyo dabiici ah. Waxaad markaa ogaan doontaa waxa loo yaqaan iyo sidoo kale sharciyada aan la aqoon ee dabiiciga ah, oo aad awood u yeelan karto inaad si waalli ah ula shaqeyso mashiinka dabeecadda weyn iyada oo loo marayo mashiinka jirka ee shakhsiga ah ee aad ku jirto.
Qarsoodi kale waa waqti. Waqtigu mar walbaba waa mawduuc caadi ah ee wada hadalka; Hase yeeshee, markii mid isku dayo inuu ka fekero oo uu sheego waxa run ahaantii, waxa uu noqonayaa mid aan la taaban karin, aan la aqoon; looma qaban karo, midna waa uu ku guuldaraystaa inuu qabsado; waxay ka careysiisaa, baxsadaan, waana mid ka baxsan. Maxay tahay mid aan la sharraxin.
Waqtigu waa isbeddelka unugyada, ama tirada unugyada, marka loo eego midba midka kale. Qeexitaankan fudud wuxuu khuseeyaa meel kasta iyo xaalad kasta ama xaalad kasta, laakiin waa in laga fikiraa lana dabaqaa kahor intaan qofku fahmin. Ficiluhu waa inuu fahmaa waqtiga inta uu kujiro jirka, soo jeedo. Waqtigu wuxuu umuuqdaa mid kaduwan aduunyada iyo dowladaha kale. Qofka miyirka qaba waqtiga uma muuqdo inuu la mid yahay inta u soo jeedo sidii isagoo riyooyin ah, ama isagoo hurdo dheer qaba, ama markuu meydku dhinto, ama markuu marayo xaaladaha dhimashada ka dib, ama inta la sugayo dhismaha iyo dhalashada jirka cusub ee uu ku dhaxli doono dhulka. Mid kasta oo ka mid ah xilliyadan waqtigu wuxuu leeyahay "Bilowgii," dhaxalgal, iyo dhammaad. Waqtigu wuxuu umuuqdaa inuu gurguuranayo caruurnimada, kuna ordayo dhalinyarada, kuna tartamayo xawaare weligiis sii kordhaya ilaa dhimashada jirka.
Waqtigu waa shabakadda isbeddelka, oo laga tolay weligeed ilaa jirka bini'aadamka oo is beddelaya. Cirifka websaydhka lagu tolay waa qaabka neefta. Maskaxda-maskaxdu waa soosaaraha iyo hawlwadeenka xarkaha, wareejiyeyaasha websaydhka, iyo tolidda xijaabyada loo yaqaan "tag" ama "hadda" ama "mustaqbalka". Fikirku wuxuu ka dhigaa cidhiidhiga wakhtiga, fikirku wuxuu wareejiyaa websaydhka waqtiga, fekerkuna wuxuu xijaabaa xijaabyada waqtiga; maskaxduna jirka ayey qabataa fekerka.
CULIMADA ayaa ah qarsoodi kale, tan ugu weyn uguna xeel dheer dhammaan waxyaalaha qarsoon. Erayga Miyirku waa mid gaar ah; waa eray af Ingiriis ah oo la allifay; u dhigmaheeda kuma muuqato luqado kale. Qiimaheeda iyo macnaheeda oo dhan muhiim ma ahan, hase yeeshe, lama qadariyo. Tan waxaa lagu arki doonaa adeegsiga erayga loo sameeyay si loogu adeego. Si loo siiyo tusaalooyin caam ah oo ku saabsan ku-takrifalkiisa: Waxaa lagu maqlaa weedho ay ka mid yihiin "miyirkayga," iyo "miyirka qofka"; iyo sida miyir-qabka xoolaha, miyirka aadanaha, jirka, maskaxda, cosmic, iyo noocyada kale ee miyirka. Oo waxaa lagu sifeeyaa miyir caadi ah, oo ka weyn kana qoto dheer, oo ka sarreeya oo hooseeya, miyir-qab iyo dibedba; iyo miyir buuxa iyo qayb ahaan. Waxa kale oo laga xusayaa bilowga miyirka, iyo isbeddelka miyirka. Mid baa maqlaya dadka oo leh waxay la kulmeen ama sababeen koritaan, ama kordhin, ama ballaadhin, miyir. Si xun u adeegsiga ereyga ayaa ku jira weedho sida: miyir beelid, miyir qabasho; inaad dib u soo ceshato, aad isticmaasho, si aad u kobciso miyirka. Oo qofku wuu maqlayaa, dheeraad ah, oo ka mid ah dawlado kala duwan, iyo diyaarado, iyo darajooyin, iyo xaaladaha miyirka. Miyirku waa mid aad u weyn oo sidaas u qalma, xaddidan, ama loo qoray. Aniga oo tixgalinayna xaqiiqadan buugani wuxuu adeegsanayaa weedha: in laga feejignaado, ama sida, ama loo galo. In la sharaxo: wax kasta oo miyir qaba ama waa ka warqab waxyaalaha qaarkood, ama sida ay tahay, ama qaar miyir qaba heerka miyirka.
Miyirku waa ugu dambeyn, xaqiiqda ugu dambeysa. Miyir-qabku waa in ay joogaan oo ay jiraan wax walba oo miyir-beel ah. Xeeldheerayaasha oo dhan qarsoodi ah, waa wax aan micno lahayn. Iyadoo aan waxba la ogaan karin; qofna malayn maayo; maya, maya lahayn, maya lahayn, xoog aan jirin, cutubna ma laha, wuxuu qabsan karaa waxqabad kasta. Hase yeeshee, miyir la'aanta lafteeda ma shaqeyneyso: ma aha mid wax taraysa; waa joogitaan, meel walba. Sababtuna waxay tahay joogitaanka joogtada ah in wax walba ay yihiin kuwo miyir-beel ah oo ay dareemaan. Miyir la'aanta maaha sabab. Looma qaadi karo ama lama isticmaali karo ama wax kasta oo ay saameeyn ku yeelan karto. Miyir qabka maaha natiijada wax, mana ku xiran tahay wax. Ma kordhinayso ama yareeynin, kordhin, kordhin, qandaraas ama isbedel; ama ay u kala duwan yihiin. Inkasta oo ay jiraan darajooyin tiro badan oo miyir-qabka ah, ma jiraan wax shahaadooyin ah oo miyir-qabka ah: diyaarado aan lahayn, dawlado lahayn; Ma jiraan darajooyin, kala qeybin, ama kala duwanaansho nooc kasta ah; Waa meel kasta oo ka mid ah, iyo wax kasta oo ka mid ah cutubka dabiiciga ah ee asaasiga ah ee Sirdoonka Sare. Miyir la'aanta ma laha hanti, sifo tayo, sifo lahayn; ma lahan; laguma lahaan karo. Miyir-la'aantu marna ma bilaabmin; ma joojin karto inay noqoto. Miyir qabka IS.
Noloshaada oo dhan intaad ku nooshahay dhulka waxaad si aan qeexneyn u raadineysay, filaysay ama raadineysay qof ama wax maqan. Waxaad si aan mugdi ku jirin u dareemeysaa haddii aad heli lahayd laakiin waxa aad u xiiseyso, waad ku qanci lahayd, waad ku qanci lahayd. Xusuus yaraanta da'da ayaa kor u kacday; waa dareennada xilligan xaadirka ah ee aad illowday; waxay ku qasbayaan daal adduun oo soo noqnoqda oo marba marka ka dambaysa ku sii qulqulaya waaya-aragnimooyin iyo madhnaan iyo wax-ku-oolnimada dadaalka aadanaha. Waxaa laga yaabaa inaad dooneysay inaad ku qanciso dareenkaas qoyska, guurka, carruurta, saaxiibbada dhexdooda; ama, ganacsiga, maalka, tacaburka, helitaanka, ammaanta, maamulka, iyo awooda - ama waxkastoo qarsoodi ah oo aan qalbigaaga ku jirin. Laakiin ma jiraan wax dareen ah oo runtii qancin kara hilowgaas. Sababta ayaa ah inaad luntay - waa qayb luntay laakiin aan lakala sooci karin oo ka mid ah miyir la'aanta aan dhimanayn ee Triune Self. Da'da ka hor, adiga, oo ah dareen-iyo-rabitaan, qaybta waxqabadka, waxaad uga tagtay fikirka iyo aqoon yaqaanka qaybaha Seddexaad ee naftaada. Marka adigaa lumay naftaada maxaa yeelay, adigoon xoogaa faham kaheyn naftaada seddexaad, ma fahmi kartid naftaada, hilowgaaga, iyo inaad luntay. Sidaa darteed waxaad mararka qaarkood dareentay cidlo. Waad iloowday qaybo badan oo inta badan aad dunidan ku soo ciyaartay, shaqsiyaad ahaan; waxaadna ilawday sidoo kale quruxda iyo awooda dhabta ah ee aad ka warqabtay intaad la jirtay fekerkaaga iyo aqoonta aad ku leedahay Xukun Joogto ah. Laakiin adigu, adigu sameeya ahaan, waxaad u xiisowdaa midowga isku dheelitiran ee dareenkaaga-iyo rabitaankaaga jirka oo qumman, si aad mar labaad ula joogtid fikirkaaga iyo qaybaha aqoon, sida Triune Self, Xilliga Joogtada Qoraallada qadiimiga ah waxaa lagu xusayaa bixitaankaas, weedho ay ka mid yihiin "dembigii hore," "dhicitaankii dadka," sida dawlad iyo boqortooyo qofku ku qanacsan yahay. Gobolkaas iyo boqortooyadaas aad ka soo tagtay kama joogsan karto inay ahaato; waxaa dib u soo ceshan kara kuwa nool, laakiin dhimashada ka dib ma aha kuwa dhintay.
Uma baahnid inaad kali dareento. Fikraddaada iyo aqoontaada ayaa kula jooga. Badda ama kaynta, buurta ama banaanka, iftiinka qorraxda ama hooska, dad badan ama kali; meel kasta oo aad joogtid, fikirkaaga dhabta ah iyo ogaanshaha adiga ayaa adiga kula jira. Xaqiiqadaada ayaa kaa ilaalin doonta, illaa intaad u ogolaanayso in aad ilaaliso. Fikraddaada iyo aqoontaada ayaa waligaa diyaar u ah soo noqoshadaada, hase yeeshee muddo dheer waxay kugu qaadan kartaa inaad heshid oo aad raacdo waddada isla markaana aad ugu noqotid mar dambe qarsoodi ahaan iyaga oo la joogaya iyaga oo ah Isaga Saddexaad ee Triune.
Waqtigan xaadirka ah ma noqon doontid, ma noqon kartid, waxaad ku qanacsan tahay wax ka yar Is-aqoonta. Adiga, sida dareenka-iyo-doonista, ayaa ah kan ka masuulka ah ee Your Triune Self; iyo wixii aad ka dhigtay naftaada sida aayadahaagu waa inaad barataa labada cashar ee waaweyn oo dhammaan waaya-aragnimooyinka noloshu ay tahay inay baraan. Casharadaasi waa:
Waxa la qabanayo;
Maxaa aan sameynin.
Waa laga yaabaa inaad casharradan dib u dhigto inta nolosha aad rabto, ama aad u baran karto sida ugu dhakhsaha badan ee aad rabto - taasi waa adiga adigu inaad go'aansato; laakiin waqtiga kadib waad baran doontaa.
Fikirka iyo Dareenka ➔